ဘရူနိုဖာနန်ဒက် ရင့်နင့်စေမယ့် စကားလုံးမျိုးကို ပြင်သစ်အသင်းမှာ ပြောခဲ့တဲ့ ပေါ့ဘာ – FBV SPORT NEWS
ဘရူနိုဖာနန်ဒက် ရင့်နင့်စေမယ့် စကားလုံးမျိုးကို ပြင်သစ်အသင်းမှာ ပြောခဲ့တဲ့ ပေါ့ဘာ
June 14, 2021 By admin Sports News
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပေါ့ဘာကတော့ လက်ရှိမှာ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေပြနေတာပါ။
ပေါ့ဘာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက ဘူဂေးရီးယားနဲ့ပွဲမှာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ခြေစွမ်းတွေပြခဲ့ပြီး ပွဲအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သူဘာကြောင့်နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ကောင်းရလဲဆိုတာကို ခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်ပြင်သစ်အသင်းမှာကစားရတာပျော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘော့စ် Deschamps pampers နဲ့ကျွန်တော်ဟာ အချိန်အကြာကြီးရင်းနီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။
သူက ကျွန်တော့်ရဲ့အမှန်တရားကို အမြဲ ပြောပြပါတယ်။ သူကကျွန်တော့်ကို အမြဲတွန်းအားတွေပေးတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ကစားပွဲဖြစ်အောင် လှုံဆော်ပေမယ့် အလွန်အကျွံဖိအားမပေးသလို ကျွန်တော်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလောက်လုပ်ပါလို့ အမြဲပြောပါတယ်။”
“ပြီးတော့ သူကကျွန်တော့်နောက်မှာ အမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့ရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ လက်ဆောင်မပေးဘူး။ ဒီအသင်းမှာ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိအောင် သူကျွန်တော့်ကိုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုကို ခိုင်မာအောင်မွေးဖွားသန့်စင်ပေးခဲ့တာပါပဲ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အသင်းအတွက် ပေးဆပ်နိုင်အောင် အရာရာကိုကြိုးစားသွားပါမယ်။”လို့ ပေါ့ဘာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပေါ့ဘာဟာမန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းမှာ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် အချိန်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပြီး အသင်းပြောင်းမယ်လို့ မကြာခနသတင်းတွေထွက်တတ်လို့ပရိတ်သတ်တွေက ပေါ့ဘာနဲ့ပက်သက်ပြီး အမြင်မကြည်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာ မပျော်ဘူးလို့ပေါ့ဘာကပြောကြားဖူးပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း ပေါ့ဘာရဲ့ အသင်းဖော်ကစားသမားတွေနဲ့ ယူနိက်တက်အသင်းဟာ ပေါ့ဘာကို အသင်းမှာ ပျော်ရွှင်အောင် ထားပေးကြပါတယ်။
ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဟာဆိုရင်လည်း သူ့အသင်းဖော်ပေါ့ဘာဟာ အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားလို့ ချီးကျူးခဲ့ဖူးပြီး သူ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမှုဟာ ပေါ့ဘာရဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမှုကို စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့တောင်ပေါ့ဘာနဲ့ပက်သက်ပြီးပြောကြားဖူးပါတယ်။
ပေါ့ဘာကတော့ ဘရူနိုနဲ့ပက်သက်ပြီး မည်သည့် မှတ်ချက်မှမပေးခဲ့ဖူးသလို မည်သည့်ချီးကျူးစကားကိုမှလည်းမပြောခဲ့ဖူးတဲ့အပြင် လက်ရှိ ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကကစားဖော်ကန်တီကို တရားဝင်ထုတ်ဖော်ချီးကျူးလိုက်တာဟာ ယူနိက်တက်က ကွင်းလယ်အသင်းဖော် ဘရူနိကိုလည်း ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုပြီး အားကစားသုံးသပ်သူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ဘရူနိုကို အသိအမှတ်မပြုဖူးတဲ့စကားလုံးကို ပေါ့ဘာက ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူကန်တေနဲ့ပက်သက်ပြီး ခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ.
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပြင်သစ်လက်ရွေးစသ် ကွင်းလယ်လူ ပေါ်လ်ပေါ့ဂ်ဘာကတော့ ပြင်သစ်အသင်းမှာ အန်ဂိုလိုကန်တီနဲ့ အတူတူ တွဲဖက်ကစားရတာဟာ အရမ်းကို ဂုဏ်ယူစရာကောင်းကြောင်း၊ပြီးတော့အရမ်းကိုထူးချွန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အပြင် အလုပ်ကိုလဲကြိုးစားသူဖြစ်သလို ပြင်သစ်ဟာလည်း တစ်ဦးချင်း စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားသလို တောင့်တင်းမှုရှိကြောင်းဖွင့်ဟလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ပရိတ်သတ်တွေရောဘယ်လိုမြင်လဲ ပေါ့ဘာဟာ ပြင်သစ်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းကောင်းမွန်တာဟာ သူနဲ့တွဲကစားရသူတွေဟာ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလို့ဆိုတဲ့ သုံးသပ်သူတွေရဲ့စကားဟာ အမှန်ပဲလို့လက်ခံပါသလား? ဒါမှမဟုတ် မန်ယူမှာပေါ့ဘာဟာ မပျော်တာကို အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးနေတာလား? ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါသလဲ?
ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ မန်ယူကစားသမားကို ထုတ်လိုက်လို့”လုံးဝရူးနေသွပ်နေတာပဲ”ဆိုပီးအဝေဖန်နေရတဲ့နည်းပြ
‘သူ့အနာဂါတ်အတွက် ယူနိက်တက်အသင်းကို စဉ်းစားပေးဖို့’ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပါရမီရှင်ကစားသမားလေး